kojakoja fanivanana Mpanamboatra sy mpamatsy | China sivana accessories Factory
kitapo fileran'ny rivotra
kitapo sivana vovoka
kitapo sivana sakafo
kitapo sivana ranoka
harona sivana harato
rivotra sivana tsapa
lamba sivana tsy tenona
lamba sivana tenona
lamba sivana harato
Lamba lamba rivotra
Kitapo vovoka karazana kitapo
trano fanivanana rano
PTFE kofehy manjaitra
lamba sivana polyester
Izahay dia manolo-tena hamatsy ny ampahany sy serivisy rehetra ilainao mandritra ny androm-piainan'ny fitaovanao mifehy ny fahalotoan'ny rivotra. 1. Fampidirana ny vokatra Ny tranom-kitapo sivana dia ny fanohanan'ny kitapo sivana ary tokony ho maivana sy mora amin'ny fametrahana sy fikojakojana izany. Ny kalitaon'ny tranom-borona sivana dia misy ifandraisany mivantana amin'ny toetran'ny sivana sy ny ain'ny serivisy amin'ny kitapo sivana.
Cartridges sivana PVDF
Ny cartridges sivana membrane PVDF sivanan-tsolika Micron Filter Cartridges hydrophobic cartridges sivana membrane PVDF dia novolavolaina ho an'ny fanivanana entona voasivana sy fanivanana vent. Ny faritra rehetra amin'ny cartridge sivana dia avo lenta mifanaraka amin'ny takiana amin'ny farmasia. Ny rafitra manokana dia manimba bakteria ny pore membrane. Ny tontolon'ny famokarana henjana sy ny fitsapana dia manome antoka ny filaminan'ny filtration. ▶ Ny membrane avo lenta dia manome fahafaha-mitazona loto, fivoarana tsara ary fantsona mahomby avo l ...
Takelaka sivana manify
Ny famaritana ny takelaka sivana takelaka dia ny ampahany fototra amin'ny sivana fanontana. Ny fitaovana, ny maodely ary ny kalitao samihafa dia misy fiantraikany mivantana amin'ny fahombiazan'ny filtrasiôna manontolo. Ny lavaka fihinanany, ny fizarana teboka sivana (fantsona sivana) ary ny fantsom-panafahana rano dia manana endrika samihafa arakaraka ny fitaovana samihafa. Fahazoana ny lovan-tsivina fanivanana mari-pana avo lenta fanoherana fatratra fanidiana famehezana sy fanasana mofomamy Anti-harafesina Fotoam-pitotoana fohy Fanomezana mofomamy ambany ...
Cartridges sivana PP
PP Filter CartridgesFaritry ny fanafody plastika PP sivana PP novolavolaina ho an'ny filàna voafaritra ao amin'ny indostrian'ny fanafody. Ny faritra rehetra amin'ny cartridge sivana dia avo lenta mifanaraka amin'ny takiana amin'ny pharmaceutika. Ny tontolon'ny famokarana henjana sy ny fitsapana dia manome toky fa azo antoka ny filtration. ▶ Filalaovana filam-banina pp tsara kalitao faran'izay tsara sy fiainana maharitra ...
Chambre membrane robber 1. data data main anarana anarana Parameter Type Rubrane membrane Chamber Dimension (mm) 400 * 400 800 * 800 1000 * 1000 1250 * 1250 1500 * 1500 Ny hatevin'ny takelaka sivana (mm) 60 65 65 70 75 Ny hatevin'ny sivana mofomamy (mm) 25 30 30 30 35 savaivony fidirana fidiram-bola (mm) DN40 DN65 DN80 DN100 DN125 Efatra (manasa) savaivony lavaka (mm) DN25 DN40 DN50 DN65 DN65 Tsindry fanivanana (MPa) ≤0.8 ≤0.8 ≤0.8 ≤0 ...
1) fanoherana ny hafanana avo (-260-300 ℃)
2) fanoherana tsara hydrolysis
Room 1016, No.2, Tao tian di, Jiang gang District, Hangzhou Zhejiang, Sina.